Alevels ဟာဘာကြောင့်ယခုချိန်ထိ ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားအများစုအတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်နိုင်သည့် အခွင့်အရေး ဖြစ်နေရသနည်း?
A levels ဟာ Post 16 British ပညာရေးစနစ်ရဲ့အဓိကစံချိန်အဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့တာ ကြာပြီဖြစ်ပါသည်။ A levels ဟာတင်းကျပ်သော်လည်း ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာရှိတဲ့ တဣသိုလ်များသို့ ဝင်ရောက်ရန်အတွက် သိသာထင်ရှားလေးစားခံရတဲ့ ဝင်ခွင့်ကတ်ဆိုလည်းမမှားပါဘူး။ သို့သော်လည်း ယခုနှစ်တွေအတွင်းမှာ The International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) နှင့် IB Career-related Programme (CP) တို့ကို ပိုမိုရွေးချယ်လာမှုများကြောင့် Alevels ဟာရွေးချယ်စရာအဖြစ်မှ ချန်လှပ်ခံရသကဲ့သို့ရှိပါသည် ။ ယခုဆောင်းပါးကတော့ A levels ရဲ့ရည်ရွယ်ချက် ၊ အကျိုးကျေးဇူးများကို ပြန်လည်ဖော်ပြရင်း The British School of Yangon တွင်အသက်၁၆နှစ်အရွယ် ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားများအတွက် အဘယ်ကြောင့် ရွေးချယ်သင့်ကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ရေးသားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အဘယ့်ကြောင့် A levels ကိုရွေးချယ်သင့်သနည်း?
A levels ရဲ့အဓိကအကျဆုံး အားသာချက်ကတော့ အထူးပြုမည့် ဘာသာရပ်များကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားများအနေဖြင့် မိမိအားသန်ရာဘာသာရပ် သုံးခု၊လေးခုကို စေ့စေ့စပ်စပ်၊ အတွင်းကျကျ အချိန် (၂ ) နှစ်အတွင်း ကျွမ်းကျင်အဆင့် ရောက်အောင်လေ့လာသင်ကြားနိုင်ပါသည်။ မိမိ မပိုင်နိုင်သော စိတ်ဝင်စားမှုနည်းသော ဘာသာရပ်များအစား ပိုစိတ်ပြင်းပြသောဘာသာရပ်များကို ရွေးချယ်တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ အနုပညာ နှင့် ဂီတ ၊ ဇီဝဗေဒနှင့် ဓာတုဗေဒဟူ၍လည်းကောင်း သို့မဟုတ် ဆက်စပ်မှုနည်းသော သင်္ချာနှင့်သမိုင်း ဘာသာရပ်များကိုလည်းကောင်းတက်ရောက်မည့်ကျောင်းသူ/ကျောင်းသား စိတ်တိုင်းကျရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ A levels ၏ ထပ်တိုးအားသာချက်များကတော့ ပိုအာရုံစိုက်နိုင်ခြင်းနှင့် အောင်မြင်မှုနှုန်းမြင့်မားခြင်းများ ဖြစ်ပါသည်။
A levels သည် ဘာသာရပ်များအား အသေးစိတ်သင်ကြားခြင်းကို ပံ့ပိုးရုံသာမက ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားများအမှီအခိုကင်းကင်းနှင့် တစ်ကိုယ်ရည်လေ့လာတတ်သောအကျင့်များရရှိအောင်လည်း တွန်းအားပေးပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် A levelsအဆင့်သည် IBDP များထက် အတန်းချိန်ပိုနည်းပါသည်။ထို့ကြောင့် ကျောင်း​၏ဖြည့်စွက်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများအဖြစ် အလုပ်ခွင်၌လိုအပ်သော အရည်အသွေးများ၊ အသိပညာများနှင့်တကွ အခြားသောကျွမ်းကျင်မှုများကိုလည်း အချိန်ပေးသင်ကြားနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် British School of Yangon ရှိကျောင်းသူ/ကျောင်းသားများသည်မိမိသင်ကြားပြီးဖြစ်သောဘာသာရပ်များကိုတိုးချဲ့လေ့လာခြင်း၊ ဗဟုသုတကြွယ်ဝခြင်း ၊လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်ကမ်းလင့် အထောက်အကူပြုခြင်းနှင့် ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်များ ကိုအဓိကထားလေ့လာသော Eclipse Programme ကိုအပိုဆောင်း သင်ကြားနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
A levels ဟာကျောင်းသူ/ကျောင်းသားများကို သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်များတွင် စေ့စပ်ကျွမ်းကျင် အဆင့်ထိသင်ကြားပို့်ချနိုင်သည်ဟူ၍သတ်မှတ်ခံရပါသည်။ A levels ​၏ ၉၄ရာခိုင်နှုန်းသောမှတ်ချက်များသည်ကောင်းမွန်နှင့် အလွန်ကောင်းမွန် အဆင့်တွင်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၇ IB University ​၏ကျောင်းဝင်ခွင့်ထုတ်ပြန်ချက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်မည်ဆိုပါက ၅၆ ရာခိုင်နှုန်းသာရှိပါသည်။
A levels သည်အားလုံးနှင့်သင့်တော်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မိမိနှင့်အံဝင်ခွင်ကျအဖြစ် ဆုံးသောဘာသာရပ်များကိုလည်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရွေးချယ် အထူးပြုနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုမျှမက STEAM ဘာသာရပ်များကိုသင်ကြားလိုသော်လည်း English ဘာသာစကားပြောကို မိခင်စကားအဖြစ်မကျွမ်းကျင်သေးသောကျောင်းသူ/ကျောင်းသားများအတွက်လည်း ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်။ ဤကျောင်းသားများအနေဖြင့် IBDP တက်ရောက်မည်ဆိုပါက ဘာသာစကားဆိုင်ရာ အားနည်းမှုကြောင့် အခက်အခဲများရှိနိုင်ပါသည်။တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုလျှင် သင်္ချာအားနည်းခြင်း၊ ဘာသာစကား အဆင်မပြေမှုပြဿနာရင်ဆိုင်ရခြင်း နှင့် GCSEs အမှတ်များကြောင့် တစ်ခြားရွေးချယ်လိုသော ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားများအတွက်လည်း အလွန်အဆင်ပြေပါသည်။
A levels သည်ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားများအားသန်ရာ ဘာသာရပ်များကို စိတ်တိုင်းကျရွေးချယ်၍ မိမိပညာရေးနှင့် အခြားကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများကို လေ့လာကြိုးစားခွင့်ပေးထားသော်လည်း စင်းလုံးချောကောင်းမွန်နေသည်မဟုတ်၍ အငြင်းပွားမှုများလည်းရှိပါသည်။ British School of Yangon ၌လည်း တစ်ဦးတည်းသီးခြား သင်ကြားရေးစနစ်ဖြင့် သင်ကြားခဲ့သောကျောင်းသူကျောင်းသား (၆)ရောက်ရှိခဲ့ပြီးပြီဖြစ်ပါသည်။ ဒီစနစ်သည် သင်ယူလက်ခံသော ကျောင်သားများ​၏ လိုအပ်ချက်များကိုလိုက်၍ ညှိနိုင်းသင်ကြားနိုင်ပြီး တစ်ဦးခြင်းဆိုသော်လည်း ကောင်းစွာသင်ကြားနိုင်သောစနစ်ဖြစ်ပါသည်။
ဒါဆိုရင် အဘယ်ကြောင့် IBDP ဟာအလွန်ခေတ်စားရသနည်း?
ဘာသာရပ်အတော်များများကို အညီအမျှသင်ကြားတက်မြောက်ထားသော ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားများ ၊ မိမိတက်ရောက်မည့် တက္ကသိုလ်များကို မရွေးချယ်ရသေးသောသူများ အတွက် IBDP ​​၏ကျယ်ပြန့်သော သင်ကြားရေးစနစ်သည် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်နေပါသည်။ A levels ကဲ့သို့ မိမိရွေးချယ်လေ့လာသောပညာရပ်တွင် စေ့စေ့စပ်စပ်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်ထိမရနိုင်သော်လည်း IBDP ​တွင်နိုင်ငံခြားဘာသာစကားလည်းထည့်သွင်းပါဝင်သောကြောင့် ပို၍ ကမ္ဘာတစ်ဝန်း ကျယ်ပြန့်ဟန်ရှိသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း အပေါ်တွင်ဖေါ်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း English ဘာသာစကားကို မိခင်ဘာသာအဖြစ် မကျွမ်းကျင်သေးသော ​ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားများအတွက် နိုင်ငံခြားဘာသာစကားထပ်မံထည့်သွင်းခြင်းက စိန်ခေါ်မှု တစ်ရပ်ကဲ့သို့ဖြစ်နေပါသည်။
IBDP ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားများအနေဖြင့် ဘာသာရပ်(၆)ခုသာမက အခြားသောအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သော TOK (Theory of Knowledge)ခေါ် ဗဟုသုတကို အခြေခံယူဆ၊ တွေးခေါ်နည်း ဆိုင်ရာပညာရပ်များ၊ CAS (Creativity, Activity, Service) ခေါ် တီထွင်ကြံဆလုပ်ဆောင်တတ်မှုဆိုင်ရာ ပညာရပ်များနှင့် မိမိ research ပြုလုပ်ထားသော Eextended Essay ရှည်များလည်းရေးရခြင်းကြောင့် စည်းစနစ်ကျကျ နေထိုင်ရပြီး ချမှတ်ထားသောစည်းကမ်းများကိုလည်း တိတိကျကျလိုက်နာကျင့်သုံးရပါသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားအတွက် ဖေါ်ပြပါပြင်ဆင်မှုများသည် သိသာထင်ရှားစွာ ပြင်းထန်သောကြောင့် အချို့သောကျောင်းသားများအတွက်တော့ တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ စံချိန်မီကျောင်းများအားလုံးရှိ A levels ​၏ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများတွင် အလားတူ ဘာသာရပ်များပါရှိပြီး ဗဟုသုတကြွယ်ဝ၍ အခြားသော စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အခွင့်အရေးများလည်း ဖြည့်စွက်ပါဝင်သောကြောင့် မလွတ်တမ်းရွေးချယ်တက်ရောက်သင့်ပါသည်။
BSY ​၏တစ်ဦးတည်းသီးခြား သင်ကြားရေးစနစ်ဖြင့် သင်ကြားခဲ့သော ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားဟောင်း (၆)ယောက်သည် ခေါင်းဆောင်ကောင်း၊ အားကစားသမား၊ နှုတ်ရေးကောင်းသူ၊ စွန့်စားလိုသူ နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်သူများအဖြစ် ပေါ်ထွန်းလာမည်ဟုယုံကြည်ပါသည်။ အချုပ်အားဖြင့်ဆိုလျှင် တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီမှ မိမိ၏အားသာချက်နှင့် ပြင်းပြစိတ်ကိုအခြေခံထားလေ့လာနိုင်သောကြောင့် ရည်မှန်းချက်ကြီးသော၊ အရည်အသွေးပြည့်ဝသော ၊ မိမိကိုယ်ကိုမိမိ ယုံကြည်မှုရှိသော လူငယ်အဖြစ်ကမ္ဘာ့အလယ်ကောင်းမွန်စွာရပ်တည်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ Mr J Mycroft (Head of Sixth Form at BSY )
မိမိကလေးအတွက် မည်သည့်လမ်းစဉ်က အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မည်နည်း?
A levels နှင့် IBDP နှစ်ခုလုံးသည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်း တရာဝင်အသိအမှတ်ပြုဖြစ်သောကြောင့် ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်များတွင် တက်ရောက်ပညာသင်ရန်အတွက်အထောက်အကူပြုပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ မိမိကလေး တက်ရောက်မည့်လမ်းစဉ်အတွက် မသေချာပါကလက်ရှိသင့် ကလေး တက်ရောက် နေသောကျောင်းရှိ ကျွမ်းကျင်သူများ​၏လမ်းညွှန်မှုများကို ရယူဆွေးနွေးပြီး အကြံအဥာဏ်များ ရရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုမျှမက အခြားသောပညာရေးစွမ်းဆောင်နိုင်မှု ၊ ရည်မှန်းချက် ၊ အလားအလာရှိသော အနာဂတ်ပန်းတိုင်များနှင့် သင်ကြားရေးအတွက်အထောက်အပံ့ပေးမည့်တွေးခေါ်စဉ်းစားပုံနှင့် သင်ကြားဟန်များကိုလည်း ဆွေးနွေးပေးလျက်ရှိပါသည်။ ဆရာ၊ဆရာမများ၊ ပညာရေးနယ်ပယ်မှကျွမ်းကျင်သူများသာမက မတူညီသောလမ်းစဉ်များရွေးချယ်သင်ကြားဖူးသောအတွေ့အကြုံရှိ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများကိုလည်းမေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ထိုကဲ့သို့ရွေးချယ်ရာတွင် အမြော်အမြင်ကြီး၍ မှန်မှန်ကန်ကန်ရွေးချယ်မှသာ ကောင်းမွန်သော စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် အနာဂတ်ကို လျှောက်လမ်းနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Tor Del Federico (Principal ) မှရေးသားအကြံပြုပါသည်။